Amaphephandaba awafanga, ukuthengisa iindaba kufile | Martech Zone
NgeCawa, ngoMatshi 25, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
UDave WinerURobert Scoble, uScott Karp, UMathew Ingram, Kwaye itoni yabanye ibibhala malunga neposti kaRobert, Amaphephandaba afile.
Ndiza kuyithatha inyathelo eliya phambili… Ukuthengisa iindaba kufile.
Pha. Nditshilo. Ndisebenze ngaphezulu kweminyaka elishumi kumzi mveliso wephephandaba, ndiyathetha. Inyani yile yokuba amaphephandaba awasazithengisi iindaba kwakhona njengoko athengisa intengiso. Iindaba bezisekondari kwintengiso yamaphephandaba kangangexesha elithile. Amaphephandaba aye abala umbala ukuthengisa intengiso. Amaphephandaba azenzekelayo iinkqubo zobuhedeni ukuthengisa intengiso. Amaphephandaba akha izityalo zamaphephandaba ezentengiso esemgangathweni ongcono. Amaphephandaba ngoku athengisa imeyile ngqo, iimagazini, upapasho lwesiko… hayi ngenxa yokuba bethengisa iindaba kodwa kungenxa yokuba yonyusa ingeniso yentengiso.
Iintatheli ezininzi ziya kucaphuka ngamazwi am. Ndiyaxolisa ngokwenene kuba ndinentlonelo enkulu kwiintatheli. Ngena kulo naliphi na igumbi leendaba, nangona kunjalo, kwaye uyakubona uhlahlo-lwabiwo mali lusikiwe, abahleli besebenza izandla ezimfutshane, amaphephandaba azalisa izikhewu ngawo AP umxholo. Abapapashi bapapasha iintengiso, hayi iindaba. Iindaba zizaliswa phakathi kweentengiso kuba iintengiso zingenisa imali.
Amaqhinga amaninzi okusasaza kwiphephandaba ngokwenyani abeka iintengiso ngaphezu kweendaba… "Thenga iPhephandaba leCawa uzakufumana ngaphezulu kwe- $ 100 kwiiTikiti." Andiyicingi indlela esenza ukuba intatheli izive… ibekwa endaweni engeyiyo nge-25 yepesenti yephepha lendlu yangasese.
Ngokwenyani andicingi ukuba oku kwahluke kakhulu kunovuko lwamanye amashishini, nangona kunjalo. Khawufane ucinge indlela ebefanele ukuba nobuchule ngayo umatshini wokukhupha iiseti zemicrometer kunye nokwakha ii-injini zeemoto. Abo machinists babengamagcisa, befunda urhwebo lwabo kwiminyaka emininzi, befunda kwizikolo zorhwebo, befunda ubugcisa obuphambili besinyithi, imathematics, kunye nokusebenza ngamandla koomatshini. Qikelela ukuba? Zitshintshiwe, nazo. CNC Oomatshini bokungqusha kunye neerobhothi bathathe indawo yeengcali. Ngoku umntu angayila kwikhompyuter kwaye kwangoko avelise amalungu abo ngaphandle kongenelelo lomntu.
Ngaba oko kuthetha ukuba iiMachinists azihlonitshwa? Akunjalongo noko. Zitshintshiwe ngokulula. Iintatheli zithathelwa indawo nazo. Ndiyazi, ndiyazi… intatheli zinoxanduva, zifundisiwe, ziyaqinisekisa ngemithombo yolwazi, banoxanduva lwamagama abo. Oku kuyinyani kodwa uqoqosho yeyona nto iphumeleleyo ekugqibeleni. Bukela iindaba zangokuhlwa okanye ufunde iphephandaba kwaye ndiyakuqinisekisa ukuba uza kubona ubuncinci ibhlog enye, ividiyo elayishiwe, okanye iwebhusayithi. Iindaba azisafumaneki kwaye zisasazwa ziintatheli, iyafunyanwa ndim nawe kwaye isasazwa kwi-Intanethi.
Eyona nto yenzeke apha kukuba abathengi ' imfuneko kuba ukuthenga Iindaba zimkile. Iintatheli kunye namaphephandaba yayiyeyona nto iphakathi koluntu kunye neendaba. Kwakungekho lolunye ukhetho. Ngoku ukhetho alunasiphelo kwaye alubizi. Ngaba umgangatho ulile? Mhlawumbi kunjalo. Kufana nokuthelekisa i-Wikipedia ne-Encyclopedia Brittanica. I-Wikipedia inolwazi oluthe kratya kwaye ayibizi penny. IBrittanica ineqhezu lamanqaku kodwa ikumgangatho ongcono. Ugqibele nini ukuthenga i-encyclopedia? Yimpendulo yakho leyo.
Inyani yile yokuba ndinokubhala ngayo Ibhlog yeBlog entsha kaGoogle. Iposi inokuba neempazamo zopelo kunye negrama, isenokungabikho kwizalathiso, isenokungabi yinto eyonwabisayo njengoko ibinokuba kwiphepha leThekhinoloji yeTimes-kodwa yafikelela kumawaka abafundi abangakhange bazikhathalele ezo zinto. Bayayixabisa into yokuba ndibhale ngayo kwaye ngoku ndisebenzisa umxholo ukuphucula iisayithi zabo. Akuzange kuthathe intatheli ukuba iphule ibali.
I-Intanethi yindlela entsha ethatha indawo yeendaba emaphepheni kwaye intatheli. Kubuhlungu, yintengiso emnandi eza kuthi shwaka. Kusaza kubakho intatheli, hayi baninzi. Kusaza kubakho amaphephandaba, kungabikho maninzi. Masijongane nayo, nangona kunjalo. Amaphephandaba azakuqhubeka nokufumana ezinye iindlela zokuthengisa intengiso. Isenokungabi yinki kwimithi efileyo, kodwa baya kuyifumana indlela.
Amaphephandaba akafanga, ukuthengisa iindaba kufile.
Ndiyazi ukuba ndiVotela bani
Mar 25, 2007 ngo 8:20 PM
> Amaphephandaba ngoku athengisa imeyile ngqo, iimagazini, ukushicilelwa okuqhelekileyo?
Ndiyakwazi ukunxibelelana naloo nto. Iphepha lethu eliphindwe kabini ngeveki lineeflaya ezininzi ngoLwesibini kunamaphepha eendaba.
Ngokufana nomculo kunye nomzi mveliso weemovie ishishini lamaphephandaba kufuneka lifumane iindlela ezintsha zokuzithengisa -zenze amava ezinto zemihla ngemihla abantu abangakhathaliyo ukukhuphela i-1.50.
Oku kuya ngakumbi nangakumbi kumaphephandaba asekhaya edolophu encinci
Mar 25, 2007 ngo 10:07 PM
Ndiyayithanda inqaku lakho malunga neendaba zasekhaya. Ndisayonwabela iphephandaba lethu leShishini apha ekuhlaleni kunye nephephandaba lam loLuntu. Basenethuba elihle ngaphezulu komnatha-unxibelelwano lwabo noluntu.
Okumangalisayo kukuba onke amaphephandaba amakhulu ayaqhubeka nokuthengisa kwizikhulu ezikhulu ezihambisa iindaba ezizezinye. Apha e-Indy, iNkwenkwezi iphethwe nguGannett. UGannett uyaqhubeka nokusika izibonelelo zasekhaya kwaye azame ukutyhala ngakumbi kwinkampani ngokudityaniswa kwenkqubo. Isika iphepha eluntwini, nangona. Ukuzibulala.
Akufanelekanga ukuba ndithenge iphepha. Ndenze njalo YONKE IMIHLA ngaphezulu kweshumi leminyaka. Ndingatsho ngokunyanisekileyo ukuba andinalo ulwazi oluncinci lokufumana iindaba zam simahla kwi-Intanethi.
Mar 25, 2007 ngo 10:16 PM
ECanada - ngakumbi i-Ontario zonke amaphephandaba amancinci aphethwe yenye yeendaba ezimbini zeendaba ezinkulu. Andiqondi ukuba akhona amaphepha-ndaba azimeleyo ayinyani ashiyekileyo ukuba anciphise iidolophu okanye iidolophu.
Le yovuya i-ove kule minyaka mihlanu ukuya kwelishumi idlulileyo apho izigebenga zimbini zaye zaya kuthenga. Ndicinga ukuba siphulukene nento exabisekileyo xa oko kwenzekile.
Mar 26, 2007 ngo 2:07 PM
Inqaku elimnandi! Andiqondi ukuba le ingangummangaliso omkhulu- okokoko i-web yaqala ukubulala amaphephandaba ahleli engxakini, okanye ubuncinci kufuneka baqonde ukuba ingxaki isendleleni.
UPaul A. Camp
Epreli 12, 2007 ngo-9: 48 AM
Ingxaki amaphephandaba khange ATHENGISE iindaba kumashumi eminyaka. Kwakukho iimfazwe zamaphephandaba malunga namabali ashushu. Imfazwe yokugqibela yolu hlobo yayinokukhunjulwa nini?
Umhleli ophambili kwiphephandaba kufuneka abe ngowona mthengisi ubalaseleyo kunye negosa eliyintloko lentengiso. Uhambo oluya nakweyiphi na indawo enkulu yokuthengisa iindaba lunokubonisa ukuba oku akunjalo kwihlabathi lanamhlanje.
Jonga kumaqweqwe angaphambili amaphephancwadi kwivenkile yeendaba xa kuthelekiswa namaphepha angaphambili amaphephandaba aboniswe apho. Omnye unokuphikisa ukuba uninzi lweemagazini zisebenzisa "amaxabiso aphantsi angama-78-weNdlela yokuhlaziya-ubuNtu-bakho-ngokwesini" ukuthengisa abafundi. Okwangoku akukho nto iphikayo ukuba amaphephandaba aphantsi kokuthengisa iindaba zawo kunye nomxholo wokufunda kubafundi. Kuphantse ngokungathi sisebenza ukwenza iphepha elingaphambili ukuba libe yinto enesidima kwaye lingabalulekanga kangako kunokuba kufanelekile.
Abahleli baya kuthetha ukuba "ukunyusa" kunciphisa ishishini labo. Ndingatsho ukuba eyona nto ibalulekileyo, ebaluleke kakhulu, eyokwenza uphando ephumeleleyo kulo nyaka wePulitzer ayixabisekanga kangako ukuba uninzi lwabathengi beli phephandaba abazihluphi ngokufunda uthotho.
Kuya kufuneka silunge ngokuthengisa iindaba kwakhona. Kuya kufuneka silunge ngokuxelela abafundi ukuba yintoni ekuyo xa befunda.
Ekugqibeleni kufuneka sonwabe ngeendaba kunye nomnye umxholo esiwuzisayo mihla le, ngeveki nangenyanga kwaye emva koko sinxibelelane olo lonwabo ngendlela echaphazelayo kwabo sinethemba lokufikelela kubo nefuthe kwiindaba. Ukuba thina njengabahleli siwenza lo msebenzi, iidola ziya kulandela kwaye amaphephandaba (nokuba zisiwa njani) aya kukhula.